Recipes of My dishes: ဂျပန်သခွား ပုဇွန် ချက် လေး ချက်စားရအောင်
ဂျပန်သခွား ပုဇွန် ချက် လေး ချက်စားရအောင်
ကျွန်မ တခါမှ သခွားသီး ကုို ချက် မစားဘူး ပါ စာအုပ်တအုပ်မှာ ချက်ထားတာ တွေ့ လုို့ ချက် စားကြည့်တာ အရမ်းစားကောင်းသွားလုို့ ချက်နည်း လေး ရေးဖြစ်သွားတာပါ
ဂျပန် သခွားပုဇွန် ချက် ရန် လုိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများ
ဂျပန်သခွား ရှည်ရှည် ပိန်ပိန်သခွား သီး ၂လုံး အစေ့နည်းပြီးတော်တော်စားကောင်းတယ်
ပုဇွန် ခပ်လတ်လတ် ရ ကောင် ၈ ကောင်
ပဲငံပြာရည် အကြည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
သကြားအနည်းငယ် (အချိုကြိုက်ရင် မကြိုက်ရင် မထည့်လဲ ရပါတယ်)
အသားမှုန့်အနည်းငယ်
ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ဂျပန် သခွား ပုဇွန် ချက် နည်း
ပထမ ကြက်သွန်ဖြူ ကုို တံပြားရုိုက်ထားပါ ပြီး ရင် ဆီ တွင် အရင် အရောင် လေး ရဲ သည့်အ ထည့်ကြော်ပါ ပြီး ရင် ဂျပန်သခွား တလက်မခွဲ အရွယ်လေးများ လှီးထားတာကုို ထည့် ကြော်ပါ ပဲ ငံပြာရည် အကြည်ထည့် ပါ သခွား သီးလေးများ နဲနဲ နွမ်း လာမှ ပုဇွန် ထည့်ပါ ပြီး ရင် အသားမှုန့် ထည့်ပါ
ပုဇွန် များ ရဲ ပြီး ကျက် လာရင် နှမ်း ဆီ အနည်းငယ် ဖြန်း ပြီစားလုို့ ရပါပြီ သကြားဖြူး ရင် အသားမှုန့် ထည့်တဲ့ အချိန် နဲနဲ လေးဖြူးလုို့ ရပါတယ်။
Posted by Sandy at 5:03 AM
Su September 6, 2012 at 6:45 AM
မြန်မာ ထမင်း ဟင်း
မြန်မာ့ ရုိုးရာ အစား အစာ
သရေ စာ လေးများ
ဆီချက် ခေါက်ဆွဲ လေး ထပ်လုပ်စားရအောင် နော်
ပြည်ပလာတာ ထပ်ချက် ပြန်ပြီ
spicy honey chicken လေး ချက်စားရအောင်
ကြက်သားလုံး ကုန်းဘောင် ကြီးကြော်လေး ကြော်စားရအောင်
PostsRefresh Now Day Week Month All time 2012 Feb 20 11:00 – 2012 Feb 27 10:00 အော်ကွေ့ ကြ. Watermark theme. Powered by Blogger.